Antonio Cabanas. «Munyori mhedzisiro yemabhuku ese aakaverenga» | Zvazvino Zvinyorwa
Antonio Cabanas. "Munyori mhedzisiro yemabhuku ese aakaverenga"
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Hurukuro, Vanyori, Novela
Mufananidzo: Antonio Cabanas. Facebook nhoroondo.
Verenga, nyora kana kutaura nezvazvo Anthony Cabanas kuona, kufungidzira uye kumutsa iyo inonakidza yeEkare Egypt. Ndakauya kwaari ndichitenda kune rimwe remazita ake anotengesa zvakanyanya (ese ari), Mwanakomana werenje, Ndakatogarapo. Nhasi ndinogovana izvi indavhiyu naye uye naye ndinotenda mutsa wako uye nguva yakatsaurirwa kuti utiudze nezve yako mabhuku avanofarira uye vanyori, yako inotevera mapurojekiti (ine nyowani nyowani mumaziso) uye yake chiratidzo Panorama yazvino kwazvo.
Na trajectory kuzadzwa ne kubudirira yakatsoropodza uye yeruzhinji zvinyorwa, uye yakadudzirwa mumitauro yakati wandei, iyi mutungamiriri yeIberia, nezviuru zvemaawa ekubhururuka kutenderera pasirese, rimwe zuva yaive subdued for the Yekare Ijipiti. Su passion zvakamuita kuti afunde zvese zvine chekuita naye, uye kubvira 1990 anga ari nhengo ye Spanish Sangano reEgyptology. Mhedzisiro, uyezve, yave iri una nhevedzano yemabhuku uye nyaya dzisingakanganwiki dzakadai se:
Mbavha ye makuva
Iwo kurangana kwa pharao
Kubvunzana naAntonio Cabanas
ANTONIO CABANAS: Handirangariri izvo zvaive el kutangaZvakanaka, ndakatanga kuverenga ndichiri mudiki kwazvo. Ndagara ndiine bhuku mumaoko angu, kunyangwe kubva panguva iyoyo ndakanzwa kudiwa chaiko Chitsuwa chefuma o Bhuku resango, uye zvakare nemabasa e Jules Verne. Uye la nyaya yekutanga iyo yandakanyora yaive mu koreji Yakanga iri kunyora nezvake rukudzo.
AC: Pasina kupokana Kuverenga kweMonte CristoNaAlejandro Dumas. Zvaiita kwandiri sekutamba kwekunakidzwa uko kwese manzwiro ehunhu hwevanhu akaratidzirwa.
AC: Iripo vazhinji vanyori vandinoda. Kazhinji, ini ndinofarira zvekare kale vanyori venhau veXIX, kunyangwe ini ndakafanorongerwa Perez Galdos.
AC: Sevanhu vanofungidzira ndingadai ndaifarira ziva a Edmundo dantesuye denga al Mr. Hyde kubva kuna mukuru Stevenson.
AC: A. nzvimbo ine rugare kwandinogona kuzvibvisa pandiri.
AC: Leo kusvika chero nguva uye ndinonyora masikati nemambakwedza.
AC: Ini ndinotenda kuti munyori mhedzisiro yemabhuku ese aakaverenga. Vanogara vachisiya mucherechedzo.
AC: Ndakaverenga zvese: mabhuku Ensayo, enganonyorwa dzerudzi rupi zvadzo dzine rondedzero yakanaka. Sezvandambotaura kare, ini ndinoda zvekare, izvo zvandisinganete kuverenga zvekare.
AC: Ndinowanzoverenga mamwe mabhuku kamwe chete. Ndichangopedza Nhoroondo yemaguta maviri, naDickens, uye ndiri kuverenga zvakare Iyo Charterhouse yeParma, yaStendhal, uye a biography yaishe Churchill. ndine chirongwa chitsva zvinyorwa pamusoro pake Yekare Ijipiti uye ndiri kutanga kushanda pazviri.
AC: Zvakaomarara. Saka akawanda mabasa anoburitswa izvo nzvimbo isina kukwana kune vese. Vazhinji vanyori vakanaka vakarasika nekuda kwechikonzero ichi.
AC: Kufanana nevamwe vese, Ndinoedza kuchinjika kumamiriro ezvinhu nenzira yakanakisa. Ini ndinozivisa ini a anotevera hasha muteveri wevanhu. Zvinyorwa zvakanaka zvakauya kubva kwaari muchimiro chinondirova sekuvhiringidza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Antonio Cabanas. "Munyori mhedzisiro yemabhuku ese aakaverenga"
Hapana nhau kubva kugurb
+7 nhetembo dzakanyorwa nevakadzi